Hal bil iyo maalmo ayaa ka dhiman xiliga dhamaadka Dowlada KMG Somalia (Warbixin)
Mudo bil iyo 21 maalmood ayaa ka hartay waqtiga ay ku egtahay dowlada KMG Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyadoo aanan wali la fulin qodob ka mid ah Roadmap-ka.
Shirarki ka dhacay Addis Ababa iyo Istanbul ayaa waxaa go,aanadi kasoo baxay dhamaantood ahaayeen kuwo ku saleysan in si dag dag ah loo qabto shaqada dhameynta waqtiga KMG ee ku qornaa barnaamijki Roadmap-ka ee lagu soo saxiixay Garoowe.
Dadka sida aadka ah ula socda arrimaha dowlada ayaa waxay ku saleynayaan dib u dhaca iyo caga jiidka howlahan in ay salka ku heyso is qab qabsi ka dhex jira dolwada dhexdeeda iyo maamul goboleedyada qeybta ka ah saxiixa heshiisyada.
Waxyaabaha dib u dhaca keenya sidoo kale waxaa ka mid ahaa gudiga dastuurka oo aanan u gudbin odayaasha waqtigi loogu tala galay iyo iyaga oo ku marmarsiyoonayey in wali wax u dhimanyihiin.
Laakin xukumada Ra’isulwasaare Gaas ayaa todobaadki hore go,aansatay in ay la wareegto dastuurka isla markaana shaacisay dastuur ay ku sheegtay inuu yahay kii ugu danbeeyey ee la turxaanbixiyo.
Hada shaqada ugu adag ee hortaala dowlada KMG uguna horeysa ayaa ah sidi odayaasha dhaqanka u ansixin lahaayeen dastuurka, kadibna loo soo xuli lahaa baarlamaanka cusub.
Hadii labadaasi qodob laga gudbo waxaa fududaan doonta shaqooyinka kale ee ah doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, balse waa hadii sio dhab ah ay shaqada u bilaabaan, sidaasi waxaa qaba qaar ka mid ah aqoonyahanada xaga siyaasada.
Si kastaba ha ahaatee, su, aasha la is weydiinayo ayaa ah jadwalki kasoo baxay shirki Addis Ababa ma u dhici doono qaabki loogu tala galay, oo 20-ka August ma noqon doontaa maalin la doortay madaxweyne cusub.
Waxgaradka Kismaayo oo eedeeyn usoo jeediyay Waxgaradka Muqdisho